FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA CHIHUAHUA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Chihuahua
Male Chihuahua, 'Vians Big Mac Attack, anaram-bosotra Mac — palitao fohy mainty sy mainty tena tsara tarehy izy ary manana loha poma lavorary. Nomelohin'ny mpitsara maromaro ho tonga lafatra izy. ' Sary natolotry ny Vian Kennels jereo bebe kokoa momba an'i Mac ao Sary Chihuahua Pejy 1
Alika kely mitovy habe amin'ny kilalao ny Chihuahua. Lava noho ny hahavony ny vatana. Boribory tsara ny loha, bika paoma ary fohy ny vava ary tendrena amin'ny fijanonana voafaritra tsara. Ny alika kely dia misy teboka malefaka eo an-tampon'ny karandohany antsoina hoe 'molera', izay mazàna mikatona rehefa olon-dehibe. Ny maso lehibe sy boribory dia voasaraka tsara ary maizina sy robina ary mety maivana kokoa amin'ny alika fotsy. Miovaova ny lokon'ny maso ary maizina matetika, fa ny gèle merle kosa afaka mamokatra alika maso manga . Ny sofina miorina dia lehibe. Dewclaws azo esorina. Ny rambony dia lava, miendrika aritra, na miforitra eo an-damosina na amin'ny sisiny. Ny palitao dia mety ho fohy, lava ary lava na fisaka. Ny loko rehetra, samy matevina, misy marika na milely dia ekena. Ny loko dia misy, fa tsy ferana amin'ny, mainty, fotsy, kastnut, volom-borona, fasika, volafotsy, sable, vy manga, mainty sy mainty ary parti-loko.
Alika mpiara-miasa tsara ny Chihuahua. Be herim-po, tena velona, ​​mirehareha ary tia ady, mankafy ny fitiavana izy ireo. Sahy, falifaly ary mailamailaka, Chihuahuas dia mety ho mafy orina tsy misy fitarihana olombelona mety. Tsy mivadika izy ireo ary lasa mifamatotra amin'ny tompony. Ny sasany maniry hilelaka ny tavan'ny tompony. Araraoty tsara izy ireo . Ho an'ny sasany, mety ho somary sahirana izy ireo amin'ny fanazaran-tena, saingy marani-tsaina izy ireo, mianatra haingana ary mamaly tsara ny fiofanana mety, hentitra nefa malefaka (fanamafisana tsara). Angamba sarotra vaky trano . Aza avela handositra ny Chihuahua amin'ny zavatra tsy avelanao alika lehibe hanao ( Syndrome kely alika ), toy ny mitsambikina amin'ny olombelona . Na dia mety ho mahafatifaty ho an'ny alika kely 5 kilao aza ny mametraka ny tongony amin'ny tongotrao rehefa mody avy any am-piasana ianao, dia mamela fihetsika manjakazaka. Raha avelanao ho azy ity alika kely ity mpitarika fonosana hiteraka olana momba ny fitondran-tena maro toy ny fialonana, herisetra amin'ny alika hafa ary indraindray amin'ny olombelona, ​​ary ho lasa tsy azo lavina fa mampiahiahy olona afa-tsy ny tompony ihany. Rehefa eo ny olon-tsy fantatra dia hanomboka hanaraka ny hetsika rehetra ataon'ny tompony izy, mitazona akaiky araka izay azo atao. Chihuahua izay mpitari-tafika ny olombelona dia mety hamono ny ankizy. Ity karazana ity dia matetika tsy atolotra ho an'ny ankizy, tsy noho izy tsy tsara amin'izy ireo, fa satria ny ankamaroan'ny olona tsy mitovy amin'ny fomba itondrany ny Chihuahua noho ny alika lehibe iray, ka nahatonga azy io ho tsy atokisana. Noho ny habeny, io karazana io dia mirona ho zazakely ary ny zavatra hitantsika olombelona mazava ho toy ny fitondran-tena ratsy ho an'ny alika lehibe dia hita fa mahafatifaty amin'ny alika kely. Alika kely koa mazàna nandeha kely kokoa , tahaka ny fiheveran'ny olombelona fa manana fanatanjahan-tena ampy fotsiny izy ireo mandritra ny andro. Na izany aza, ny dia an-tongotra dia manome mihoatra ny fanatanjahan-tena fotsiny. Manome fanentanana ara-tsaina ary manome fahafaham-po ny fahatsapana fifindra-monina ananan'ny alika rehetra. Noho io antony io, ny karazana kely toa ny Chihuahua dia manjary manjary maloto, faly, miaro ary tsy atokisana amin'ny ankizy sy ny olona tsy fantany. Chihuahuas izay mpitarika ny zanak'olombelona dia mirehareha amin'ny alika. Ny tompony izay mahatsapa an'io ary mitsabo ny Chihuahua tsy misy hafa noho izy ireo karazana lehibe, lasa mpitarika kitapom-batsy mazava, dia hanana toetra hafa manintona kokoa avy amin'ity alika kely mahafinaritra ity, mahita azy ho namana ankizy kely tsara.
Hahavony: 6 - 9 santimetatra (15 - 23 cm)
Milanja: 2 - 6 pounds (1-3 kg)
Mora ateraky ny rheumatisme, ny tsy fahatomombanana, ny sery ary ny olana amin'ny siligaoma. Ary koa ny fahamainana kornea sy glaukoma faharoa, noho ny mason'izy ireo mipoitra. Mora mahazo lanja. Mitandrema manodidina ny vokatra misy poizina toy ny sôkôla na zezika. Karazana bitika kely tokoa ity ary tsy dia mila hanapoizina azy ireo. Ny Chihuahuas dia matetika teraka amin'ny alàlan'ny fizarana cesarean satria alika kely dia lehibe no teraka. Mora tratry ny vaky sy lozam-pifamoivoizana hafa amin'ny alika kely. Ny Chihuahuas sasany dia manana molera, faritra tsy misarona ny karan-doha izay afaka mijanona misokatra mandritra ny fiainana. Izany dia mahatonga ny alika mora tohina. Manana fironana hikorontana sy hikororoka noho ny muzzles keliny sy fohy. Mora adin-tsaina, ateraky ny fironan'ny tompony hitondra azy ireo toy ny zazakely. Ny alika rehetra, na dia ny bitika kely aza dia mila mahatsapa ny tompony fa olona manana saina matanjaka afaka mifehy ny fonosana iray manontolo.
Ny aretina izay toa mitombo eo amin'ny Chihuahuas dia ny GME, izay midika hoe Granulomatous Meningoencephalitis. Manjary matetika kokoa eo amin'ny lohan'ny paoma Chis izy io. Amin'izao fotoana izao dia aretina tsy dia takatry ny saina loatra amin'ny rafi-pitabatabana afovoany izay tampoka nefa tsy misy fampandrenesana. Izy io dia misy karazany telo: ny lozam-pifamoivoizana (ny lesoka ao amin'ny ati-doha na ny hazondamosina) multifocal (lesion amin'ny ati-doha sy ny hazondamosina ary koa ny maso) ary ny optika (miteraka fahajambana. Misy fomba maro ankehitriny amin'ny fitsaboana azy io amin'izao fotoana izao ary izay manohy havaozina ho fikarohana bebe kokoa no atao. Na dia misy fomba fifehezana izany amin'ireo alika velona mandritra ny tapa-bolana voalohany aza, indrisy, tsy misy fanasitranana tena izy. Mety hiditra amin'ny famelana, indraindray mandritra ny taona maro, nefa afaka mipoitra foana. Ireo fanafody, fitsapana, sns. eo am-piandohana mba hamaritana tsara ny diagnostika dia an'arivony maro ny vidiny ary an'arivony maro hafa koa no mila holaniana mandritra ny taona sisa tavela amin'ny alika.Raha ny GME kosa dia miseho amin'ny karazany maro hafa (amin'ny ankapobeny ny karazana kilalao na dia misy hafa aza dia misy Chihuahuas maromaro miaraka aminy. Mahaliana fa ny loha serfa Chihuahua's dia tsy mirona amin'ny GME, fa ny karazana lohan'ny paoma ihany.
Alika kely tsara izy ireo amin'ny fiainana an-trano. Tian'i Chihuahua ny toetr'andro mafana ary tsy tiany ny hatsiaka. Mila toerana toy ny alika hafa izy ireo. Satria bitika izy ireo dia tsy midika hoe azo tehirizina amin'ny faritra tena kely izy ireo.
Na dia manintona aza ny fitondrana ireo zavaboary marefo ireo, dia alika kely mavitrika mila a mandeha isan'andro . Ny filalaovana dia afaka mikarakara be dia be ny filan'izy ireo manao fanatanjahan-tena, na izany aza, toy ny karazany rehetra, ny lalao dia tsy hanatanteraka ny toetrany voalohany handeha. Ny alika izay tsy afaka mandeha amin'ny diabe isan'andro dia azo inoana fa haneho karazana maro olan'ny fitondran-tena , ary koa ny olana momba ny neurotic. Izy ireo koa dia hankafy romp tsara amin'ny faritra malalaka azo antoka tsy misy firaka, toy ny tokotanin-trano mimanda.
Ankizy 1 ka hatramin'ny 3 eo ho eo
Ny palitao malama sy fohy volo dia tokony hosokafana moramora indraindray na hamafana lamba malemy fotsiny. Ny palitao lava dia tokony kosehina isan'andro amin'ny borosy malefaka. Mandroa indray mandeha isam-bolana ireo karazany roa ireo, mitandrina mba tsy hahazo rano amin'ny sofina. Zahao tsy tapaka ny sofina ary tazomy ny fantsika. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ity no karazany tranainy indrindra amin'ny kaontinanta amerikana ary karazany kely indrindra eto an-tany. Teratany Mexico, izay nahazoany ny anarany avy amin'ny Fanjakan'i Chihuahua Mexico. Tamin'ny faran'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo ihany no nitondrana azy tany Eropa. Tsy mazava ny karazany izay nananganana ny Chihuahua, fa ny sasany kosa mihevitra fa avy amin'ny Fennec Fox io. Masina ho an'ny firenena Indiana alohan'ny Columbianina ireo alika ireo ary biby fiompy malaza amin'ny kilasy ambony ihany koa. Ny alika dia sarobidy amin'ny habeny ary sarobidy indrindra amin'ny mpamatsy vola sasany rehefa milanja ambanin'ny 1,3 kg / 4 kilao.
'Nahazo an'i Stoli (ankavanana) izahay 3 taona lasa izay fony tany amin'ny oniversite tany atsinanana tany UNC izahay. Ny sary voalohany dia izy amin'ny 7 herinandro. Akanjo palitao fohy misy sable mainty izy. Rehefa nihalehibe izy dia nanjavona ny sable mainty ary saika saika mihintsy izy afa-tsy ilay dian-kapoka mainty amin'ny rambony. Tsy maintsy niasa mafy izahay mba hisakanana azy tsy hahazo ' aretin'alika kely , 'izay mahatonga ny karazana kilalao mankafy sy tsy tian'ny olon-tsy fantatra. Nifandray amina namana sy mpianakavy maro izy ary nentiko tany an-dakilasy niaraka tamiko sy tao anaty bus aho. Nentiko niaraka tamiko aza ny fitaizany zaza ary TIA izao ny ankizy izay tsy fanao mahazatra amin'ny alika kely. Noho ny asa mafy ataontsika mba ataovy toy ny alika izy ary tsy kilalao kely marefo dia tena izy tsara fitondran-tena ary tsy matahotra olona sy manodidina vaovao. Fantany koa ny tetika maherin'ny 15 ary tiany ny manao fampisehoana! 3,8 pounds i Stoli ary efa ho 3 taona. Iray volana lasa izay dia nanapa-kevitra izahay fa haka mpiara-milalao amin'i Stoli izay mitovy habe aminy. Ity sary voalohany ity dia Roxi amin'ny 8 herinandro sy 15 aun. Chihuahua lava volo izy ary tokony hahatratra 3-3,5 pounds rehefa olon-dehibe. Ny volony lava lava dia tsy ho matotra mandra-pahatongan'ny manodidina ny 1 1/2 taona, ary mandritra izany fotoana izany dia handeha amin'ny 'pupy uglies' izy io izay dingana maha-zatovo mahamenatra ho an'ny akanjo lava mifono lava eo anelanelan'ny palitao sy ny palitao lehibe. Ny lokony dia mainty sy mainty ara-teknika miaraka amin'ny vozon'akanjo fotsy sy tongotra fotsy. Izy koa dia manana marika marle izay manome ny endrika manga sy mainty mainty ho an'ny palitaony. Ny gen merle dia mamoaka ny ankamaroan'ny loko avy amin'ny faritra mainty amin'ny palitao mamela ireo faritra volondavenona / manga. Nisy fiatraikany tamin'ny lokon'ny masony koa, izay manga sy volontsôkôlà marbra. Voaràra amin'ny fikambanana sasany manerantany ny merle Chihuahua, saingy mbola avelan'ny AKC amin'ny peratra fampisehoana izany. Ny anton'izany dia ny olana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny fototarazo. Saingy tianay hatramin'ny fahafatesan'ny Roxi kely ary salama tanteraka izy ary mihombo haingana! Mandehandeha eran'ny tanàna miaraka amin'ireto roa ireto izahay dia mijanona tsy tapaka hanontaniana hoe alika manao ahoana izy ireo ary milaza aminay hoe mahafatifaty izy ireo. Vao tsy ela akory izay dia nandre ankizy niantsoantso mafy izahay hoe 'Reny mahita fa avy any Beverly Hills izy ireo!' noho ny sarimihetsika Disney vaovao. '
'Ireo no zanakay Chi, avy any ankavia: Maxwell (6 volana), Milo (9 volana) ary Matilda (9 volana koa). Raha Milo sy Matilda dia eo amin'ny lafiny lehibe amin'ny refin'ny Chi amin'ny 7 sy 9 lbs., Maxwell dia eo amin'ny habe antonony kokoa eo amin'ny 4½ lbs. Milo dia eo amin'ny lafiny kamo ihany raha oharina amin'ny roa hafa ary indraindray hipetraka fotsiny hijerena ny hafa milalao. Izy koa dia somary tsy natoky tena izay iarahantsika miasa aminy. Be fitiavana daholo anefa izy ireo ary dodona ny hizara oroka amin'izy ireo olona ary miaraka amin'izy samy izy. Indraindray izy ireo dia handry amin'ny masoandro mandro ny endrik'izy ireo ary manome antoka fa samy mijery ny tsara indrindra izy ireo. Avy eo dia handroboka lamba firakotra, ondana sns izy ireo mandra-pofon'izy ireo azy fotsiny mba hahazoany aina ary avy eo mandroso hatory maharitra. Na dia tsy misy amin'izy ireo aza ny Alfa '(izany ny asan'ny olombelona, ​​sa tsy izany ?!) ny vehivavinay, Matilda no be mpampiasa indrindra ao amin'ilay vondrona. Raha te-hilalao izy dia aleonao milalao fa raha tsy izany dia mahazo 'daka ampondra' ianao mandra-pahatongan'ny fihetsiny. Vehivavy mahazatra! (ary eny, azoko lazaina izany satria vehivavy aho!: o)
'Olona alika be foana aho ary tena tsy tiako mihitsy alika kely . Na izany aza, rehefa te-hanampy fanampin-trano vaovao izahay dia nanao ny fikarohana nataoko ary nahita ny Chihuahua mifanaraka amin'ny zavatra tadiaviko amin'ny alika. Toa nihoatra ny zavatra nantenain'izy ireo aho rehefa nandeha ny iray hatramin'ny telo Chihuahua tao anatin'ny 3 volana fohy ary tsy nanenina mihitsy.
'Nijery ny seho nataon'i Cesar Millan aho nandritra ny roa volana izao ary nanomboka nampiasa teknika be dia be. Na dia mbola kely aza ireo zanako kely ary asa mandroso toy ny ankamaroany, mieritreritra aho fa hanampy azy ireo ho olon-dehibe mahay mandanjalanja ny fampiasana ireo teknika ireo. Mazava ho azy, arakaraka ny hijereko bebe kokoa no hianarako ary izaho koa dia ' mpitarika fonosana miasa mandroso. ' Ny zanako dia efa misaina tsara vokatr'izany ary ho ohatra amin'izany raha hitanao fa 'pose-easy' mora amin'ny sary izy ireo. : o) '
'Jasper dia merina manga 9 volana Chihuahua milanja 1.4lbs. Izy dia mpampihorohoro bitika, fa zazalahy tsara amin'ny ankapobeny. '
'Monkey dia Chihuahua 10 herinandro. Nahazo ny anarany hoe Monkey izy satria mananika ny soroko lalandava izy ary mankafy akondro, noho izany dia nieritreritra aho fa tena mety aminy ilay 'Monkey'. Tena milalao izy ary mahafaly tokoa ny manana. Tena tanteraka izy pad voaofana izao ary mahalala fitorevahana ! Mipetraka miaraka amin'ny olon-dehibe 2, tanora 2 (15 sy 16) ary ankizy kely 2 (7 sy 11) izy ary tiany ny rehetra. Saingy, mifikitra amiko (16 taona aho). Ny rajako dia tombanana ho 3 lbs eo ho eo. lehibe. Tena marani-tsaina izy ary manana fomba fanao, mahagaga. Gidro azo antoka a lapdog ary manaraka ahy manodidina na aiza na aiza !! Tia mitaingina fiara ary tena mifanerasera tsara . Nijery an'i Cesar Millan efa ho 3 taona izao aho ary namaky ny bokiny. Mahagaga izy ary nampianatra ahy be dia be momba ny psikolojia momba ny alika, tena sampiko izy. Alika mahay mandanjalanja i rajako ary nampianariko ny zanany tsy hanana ny saina mandehana manerana ahy na manandrana mifehy ahy amin'ny fomba rehetra. Na dia simba aza izy, dia mahalala izay sefo . Tsy azoko an-tsaina ny fiainako raha tsy misy ny rajako kely ary manana taona maro tsy andrasana. Hanana Chihuahuas fotsiny aho, dia karazany mahavariana izy ireo ary tena mahafaly tokoa !! '
'Ity no zanatsika 8 volana, 4,5-lb. Chihuahua Tequila. Miantso azy hoe Tiqi amin'ny anaram-bosotra izahay ary tianay hatramin'ny fahafatesany. Tena mahery izy ary faly mahita ny lisitry ny tranokalanao tokony ho izy ireo nandeha isan'andro . Betsaka ny olona mieritreritra fa satria kely dia kely izy dia tsy mila an'io, saingy tsara kokoa ny fihetsiny rehefa nampiharina izy. Tena ara-tsosialy izy ary mino fa ny olona hitany dia eo ho tombontsoan'ny petting azy fotsiny. Tsy nianatra niresaka hodi-kazo mihitsy izy, izay mety ho antsika. Mahomby amin'ny alika sy ankizy hafa izy ary tena mahay! Afaka nampianatra azy hipetraka izahay, hihozongozona amin'ny tongony ankavanana sy ankavia ary 'handeha tsara' ao anatin'ny herinandro! Ity no fiomanany hatory ao amin'ny PJ's-ny. '
laboratoara miharo ra mifangaro alika kely amidy
Ity i Boo, Chihuahua mainty mainty lava, feno 1 kilao. Ny mainty mainty dia tsy loko mahazatra amin'ny karazany Chihuahua.
Chihuahua olon-dehibe miloko sôkôla
Alika kely Chihuahua miloko sôkôla
'Blondie, ny Chihuahua antsika dia 9 taona ary niara-nitaingina taminay nandritra ny 5 tamin'izay. Blondie dia nitaingina 1000 kilaometatra. Entinay miaraka amina dia lavitra izahay. Raha mijanona hihinana izy dia manana kitapo izy mipetraka eo am-pahatoniana rehefa misakafo isika (mazava ho azy fa ampidirina anaty kitapo ho azy ny sakafo). Izy no alika mahatalanjona indrindra nananako. Tiany ny miaraka amintsika na aiza na aiza alehantsika. Manao paosy mitaingina hoditra sy akanjo hoditra ho an'ny alika aho. Amidiko amina rallye môtô ireo ary modely tsara izy. Ny sary alefako dia nalain'ilay sakaizanay izay handeha hihazo ny Bonnie sy Clyde mitaingina Louisiana. Alika mahay mandanjalanja ny alikako. Raha ny marina dia mijery an'i Cesar tsy tapaka isika. Tamin'ny iray tamin'ireo fizaràny dia nanampy ny mpivady iray tany Kalifornia izy hitondra ny alik'izy ireo, Jack Russell, handeha. Eo am-piandohan'ity fizarana ity dia mitafy ny akanjo iray alika izay novidiana tamin'ny eBay ny alika. Etsy an-danin'izany, mpitaiza alika aho ka tokony hiara-miasa amiko isan'andro. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Chihuahua
Sary Chihuahua 1
Sary Chihuahua 2
Sary Chihuahua 3
Sary Chihuahua 4
Sary Chihuahua 5
Sary Chihuahua 6
Sary Chihuahua 7
Sary Chihuahua 8
Alika Chihuahua: Sarivongana Vintage azo angonina
Mpampijaly amerikana 5 volana
kilalao amboahaolo terrier poodle Mix
sary poodles kely mainty
bulldog afangaro amin'ny terter omby
chow chow rottweiler afangaro alika kely
mpiandry anglisy alemanina mpiandry ondry mix